Lena indawo dating, futhi indawo dating for abathandi pet, akukho ngaphansi. Ngakho singaxoxa nje umzuzwana mayelana izinja zesifazane? Futhi ngiqonde “dogs female” ngomqondo euphemistic kakhulu, njengoba uyalandisa hhayi canines, kodwa abantu zinhlobo uzakwabo yabo enikeza zesifazane dogs igama yabo embi. Kodwa ngoba lena indawo SFW futhi ngomzamo kokukubuyisela izinja besifazane ngenhlonipho futhi bathande Kubafanele-asikhulume esikhundleni mayelana Amazing Queen Izinyosi (noma HQBs) futhi amadoda babathande, futhi yini kukhona esingakufunda kuzo ubuhlobo bethu siqu kangcono.
Siphindaphinda, Bengilokhu lokuqala isandla ubufakazi lo mkhuba “guy nice uthanda HQB”. Kuba ngempela isimangaliso ukuyobonani-okhathalelayo, uhlobo ezithandayo, Umuntu nomusa nokuphana obonakala njalo isikhundla ukugoba uvume for HQB yakhe; futhi kubonakala futhi abathanda njalo ngeminithi nokusabela izimfuno zakhe nasekufakazeni babekezelela kwenyanya wakhe ngokungakhethi. Kodwa lezi ubudlelwano nazo ezinye zezindawo ezingcono kakhulu Sengike ngakubona ngokuya zokuba nempilo ende; futhi kanjalo, Ngike lusobala, ngokoMthetho elithile ubuhlobo impumelelo.
Ngakho yini singabugcina, njengoba ehloniphekile, Abesifazane esicatshangelwe sifunde HQBs ukuheha ugcine anjani ukuthi babonakala ube nenkinga edonsa nokugcina?
1) HQBs babe nomuzwa onamandla wokuzimela
HQBs ukuthi bangobani futhi bafunani. Bayazi lokho imenze etafuleni futhi ezithakazelisayo ngoba izithakazelo zabo siqu futhi kungafani kusukela izithakazelo umlingani zabo. It is boring zaphetha ngokwakho, futhi HQBs sesizicabangile lokhu.
2) HQBs babe umyalo umhlaba wabo
An HQB Kubonakala umyalo izwe elizungeze wakhe (noma ngabe ngempela noma cha). Lokhu izinga ihlinzeka umfutho enganakile kumlingani wakhe sika ukuzazisa-uma unalo ngezinga okwenza uyajabula, futhi enendawo okulawula “The World”, yena uyakwazi ukulawula “The World” yi-proxy. Kuyinto ukuthi wonke “uma A = B no B = C, ke A = C” into. lokhu ukuhumusha kanjani ku ithiphu ewusizo? Decent, Abantu abacabangayo abanjengawe nami bathambekele hhayi qina kakhulu nge izenzo zethu nokuxhumana. Ukuzazisa ihlukile kakhulu kunokungashadi nolaka, okuyinto M.O eyisisekelo. of HQB yakho ngokwesilinganiso futhi yilokho wakhe unika ukuthi ukugula ngomgunyathi, ukulawula tenuous of “The World”. Kodwa, ukuzazisa ngaphezulu liyakuthela umyalo omkhulu womhlaba wakho, ngaphandle imiphumela ngenye indlela linencazelo ephambene sonya. Esinye isibonelo salokhu kumane ukweneka okufunayo futhi kungani kunengqondo ngombono wakho, sans the elulaza, intukuthelo Ukuzehlisa kaningi abaqashiwe ekwenzeni izicelo ezifanayo by HQBs.
3) The olokhu popular futhi kungase kutholakale, “Amadoda Like a Challenge”!
Bangaki ukuphola izihloko kanye zincwadi ufunda ukuthi bazinikele kwabanye version of the qiniso eliyisisekelo ukuthi amadoda bathanda banikelwe inselele, kanjalo bazizwa extra ekhethekile lapho bayakwazi anqobe kusho inselele? Kodwa, ngokwabo, uyokhuluma lokuthola owesifazane esiyivelakancane ngaphezulu ezikhangayo ezingaphezu kuka unguye nencwadi evuliwe njalo ekhona. Ngezinye izikhathi sibonisa ngomkhuba wokuzifihla njengoba indlela okufanele Ngithi-ekubeni kancane abancishanayo ne ezwakalisa yiluphi uhlobo imizwelo emihle noma impendulo (okuyilapho HQBs angene). Abanye abantu abakwazi ukumelana nenselele uzama obungemthetho yiluphi uhlobo Ukusabela emnandi kusukela HQB futhi ngakho kuba into isithakazelo esikhulu.
Wenza njani uku (aphinde, njengoba ehloniphekile, Owesifazane esicatshangelwe wena) vula ngokwakho khona more of a inselele? Lokhu kungenza kube lula babe disingenuous umdlalo Umlingiswa ukuthi izincwadi ezifana “The Rules” (Fein and Schneider) konke, okuyinto zingase zingasebenzi wonke umuntu futhi ungashiya ugula-umuzwa kanye badideke kanjani ofuna ukukusho nesikhathi. Kunalokho, wakha ukuphila kwakho igcwele ngobuqotho futhi kujabulise-okwenza wena inselele kweqiniso nail phansi usuku nge. Ngeke nje ke hlola off ukuthi wonke “kube inselele” Mnikeni lokho ungracefully lwezinceku HQBs (ukuthi amadoda ukuthola zikhanga kangaka), kodwa usuku lwakho ngeke nomuzwa wokuthi okuningi zenani uma uke wenza iphuzu ukuchitha isikhathi sakho esiyigugu ngokucacile naye.
4) No imidlalo
Kufika isikhathi lapho amadoda ayeke enanela imidlalo ukuqagela-ukuthi lokhu ngenxa kubo yokuba kancane more ovuthiwe, noma ubuhlobo uqobo njengoba ekhulele angaphezu Ukudlala ngothando nokuhlale ucabanga yayo sokuqala. Mhlawumbe lokhu ithiphu kungenziwa okungenani ingxenye udumo "nempilo ende" lonke anomaly eyethulwe HQB / Nice Guy ubudlelwano. HQBs uthi lokho abakufunayo, futhi lapho ufuna khona. Zimbalwa imidlalo kanye intangibles asebenzelane HQB, futhi amadoda amaningi ukuthola leli aqabulayo. Lokhu kuyafanelana izakhi kusuka ambalwa wangaphambilini amathiphu-ekubeni kuqondile nge yokuxhumana nawe (I.E. ngokuba nabazikhukhumezayo), futhi kucace kakhulu nalokho ufisa umlingani wakho uma ngeke kakade ukuhlinzeka it, uke owethulwe inselele angase ajabulele sandise inkonzo ukuhlangabezana ngoba uke waba kucace kangaka futhi ngeke yesabe imizamo yakhe iyoba ize.
Ngakho, Hearts-thatha Kind inhliziyo, futhi la macebiso ukuze inhliziyo-futhi mhlawumbe singaba bathi a share likhudlwana ezimakethe Nice Guy ngokwethu!